एजेन्सी – बलिउड स्टार सलमान खानलाई सुरक्षा खतरा रहेको भन्दै भारतीय प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको छ।
यतिबेला आफ्नो आगामी चलचित्र रेस – ३ को प्रचार-प्रसारमा रहेका अभिनेता खानलाई ग्याङ्ग स्टारहरुबाट सुरक्षा थ्रेट रहेको भन्दै भारतीय प्रहरीले उनको सुरक्षा व्यवस्थामा थप कडाई गरेको छ।
हालै सार्वजनिक भएको एक रिपोर्टका अनुसार सम्पत नेहरा नामका ग्यांग स्टारका तीन जना सहयोगीले सलमानलाई नोक्सानी पुर्याउने योजना बुनिरहेको खुल्न आएको छ। सो रिपोर्ट बाहिर आए लगत्तै उनीहरुको लोकेशन पत्ता लगाउने काम भैरहेको भए पनि पत्ता भने लाग्न सकेको छैन। मुम्बइ प्रहरीले दिएको जनकारी अनुसार सम्पतका तीन साथीरु अक्षय, अंकित र राजू सार्प शूटर हुन् ।
यसअघि नै पक्राउ परेका गुण्डा सम्पतले सलमान खानलाई मर्ने योजना बुनिरहेको खुल्न आएको थियो। तर अहिले जेलभित्र रहेर पनि उनले सलमानको हत्या योजना बनाई रहेको हुन सक्ने र उनका सहयोगीहरु बाहिर रहेको कारण सलमानमाथी खतरा भने अझै रहेको प्रहरीको ठहर छ
प्रकाशित : बुधबार, जेठ ३०, २०७५१८:२६
यी हुन् बलिउडका सबै भन्दा छाडा नायिकाहरु ! नग्नताका पर्याय बनेका नायिकाहरुमा को-को पर्छन् ?
बलिउडका शीर्ष ५ महंगा बालकलाकार : एउटै फिल्मको लागि लिन्छन मोटो रकम
वीपीकी नातिनी मनिषालाई विवेकशील साझामा आउन रवीन्द्र मिश्रको आग्रह ! मिश्र आफैले गरे खुलासा !
गायक बद्रि पंगेनीको गीतले नेता र दर्शका आखाँमा आँसु
आफ्नै प्री-वेडिंग सेलिब्रेशनमा यती महँगो कपडा लगाएर पुगिन् प्रियंका ! मूल्य सुन्दा सबै चकित !